Nhau - Saizi wepasi rose musika weanoshandura indasitiri inodarika mabhiriyoni zana mu2020
Saizi yepasi rose musika weanoshandura indasitiri ichapfuura mabhiriyoni zana mu2020
Mumakore achangopfuura, iyo yepasirese simba kufambisa uye yekuparadzira michina yemusika kudiwa kazhinji kuri kuwedzera.
Kuwedzera kwesimba remagetsi, kukura kwehupfumi uye kudiwa kwesimba munyika dzichiri kusimukira kuchaendesa musika wepasi rose wemagetsi kubva pamadhora gumi nemazana matatu emadhora muna2013 kusvika pamadhora mabhiriyoni 19.7 muna 2020, iine huwandu hwegore rekukura huwandu hwe9,6 muzana, sekureva kwenzvimbo dzekutsvagisa.
Kukurumidza kukura kwesimba kudiwa muChina, India uye Middle East ndiye mutyairi mukuru wekutarisirwa kukura mumushamba wepasi rose weshanduko musimba.Ukuwedzera, kuda kwekutsiva uye kusimudzira maTransformers ekare kuNorth America neEurope kwave kuve mutyairi mukuru we musika.
"GRID yekuUK yatove yakashata kwazvo uye kungoita nekumisikidza uye kukwidziridza grid iyo nyika ichakwanisa kudzivirira kudzima magetsi. Saizvozvowo, kune dzimwe nyika dzeEurope, dzakaita seGerman, kune kuenderera mberi kwekugadziriswa kweiyo grid nemagetsi. kuona kuti magetsi aripo. "Vakadaro vamwe vaongorori.
Mune maonero evanyanzvi, pane zvinhu zviviri zvekusimba kwakasimba kwekukura kwepasirese musika chiyero. Kune rimwe divi, kukwidziridzwa uye shanduko yemagadzirirwo echinyakare ichaunza mugove mukuru wemusika, uye kubviswa kwezvigadzirwa kumashure kunogona kusimudzira kusimudzira kwakanaka kwekubhidha nekutengesa, uye mabhenefiti akakura ezvehupfumi anozoonekwa.
Kune rimwe divi, iko kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa, kushandisa uye kugadzirisa magetsi-anoponesa uye shanduko dzakangwara zvinozove zvakanyanya, uye zvigadzirwa zvitsva zvinounza mikana mitsva yekuvandudza indasitiri.
Muchokwadi, iyo indasitiri yekugadzira indasitiri inovimba nekudyara kubva kumaodzanyemba maindasitiri senge magetsi, gidhi remagetsi, simbi, petrochemical indasitiri, njanji, kuvaka kwemadhorobha zvichingodaro.
Mumakore achangopfuura, ichibatsirwa nekukurumidza kusimukira kwehupfumi hwenyika, mari mukuvakwa kwesimba remagetsi uye grid yemagetsi yanga ichiwedzera, uye kudiwa kwemusika kwekutakura nekuparadzira michina kwawedzera zvakanyanya. Zvinotarisirwa kuti musika wepamba unodikanwa neshanduko uye zvimwe zvekufambisa uye zvekuparadzira michina zvicharamba zviri padanho rakakwirira kwenguva yakareba iri kuuya.
Panguva imwecheteyo, iyo gridhi yenyika yebasa regiravhiti uye hurongwa hwekuvandudza hwese indasitiri yemagetsi ine simba rakakura, iyo yekuparadzira network otomatiki uye kumisikidza kwebasa retrofit kuchaitisa shanduko yemusika wekushandura, kubhidha kuchawedzera kwazvo huwandu yemusika wepasi rose wevatengesi unodzikira zvishoma nezvishoma wakanangana neChina, iko kushandiswa kwekucheka-kumucheto zvigadzirwa zvinotarisirwa kuti zviite zvirinani muChina.
Post nguva: Aug-19-2020